Okwu mmalite nke ụlọ ọrụ - Foregene Co., Ltd.
Foregene Co., Ltd bụ ọkachamara na ngalababayoloji ihe omimiụlọ nyochareagents na Ngwa IVDmmepụta na ọrụ, nke jikọtara na R & D, mmepụta na ahịa.Foregene nwere ndị isi ụwaDirect PCR ikpo okwu,kọlụm abụọ RNA Isolation ikpo okwu,naDNA-naanị Silica Membraneikpo okwu.Ngwaahịa ndị bụ isi gụnyereMwepu DNA/RNA ngwas, PCR na Direct PCR reagents, ngwa Genotyping, ngwa IVD dị iche iche (COVID-19 nucleic acid).rRT-PCR, antigen, ngwa nchọpụta ihe mgbochi, ngwa ihe nchọpụta nje bacteria 15 sistemu iku ume), wdg.Ngosipụta teknụzụ na arụmọrụ ngwaahịa ejiri na-eduga ọkwa ụwa niile, etinyere ya n'ọtụtụ ebe n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ nyocha na nyocha, ụlọ nyocha mahadum, ụlọ nyocha ahụike, wdg.
Foregene Co., Ltd. tọrọ ntọala na Eprel 2011 site n'aka ndị ọkà mmụta ama ama bụ ndị lọghachiri na-agụ akwụkwọ na Mahadum Yale, ndị na-emepụta ihe a ma ama na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ.Ndị otu Foregene R&D nwere mmadụ 40 (karịsịa phD na nna ukwu), nwere ụlọ 2500 ㎡ comprehensive, 600 ㎡ P2 labatory, na 1200㎡ GMP mmepụta ihe.
Site na teknụzụ PCR Direct, ọ dịghị mkpa ka a na-eme ka ọ dị ọcha nucleic acid dị nro, a na-agbakwunye ihe nlele ahụ ozugbo na sistemụ wee na igwe. Ugbu a ihe niile na-egosi Foregene.PCR ozugbonkà na ụzụ izute mkpa nke ụlọ ọgwụ nchoputa.
N'afọ 2016, e hiwere ụlọ ọrụ nwechara ụlọ ọrụ, Fengji Biotechnology, nke raara onwe ya nye na mgbanwe nke teknụzụ PCR Direct na ngalaba nyocha nke molecular.
Na njedebe nke afọ 2019, emechara R&D nke "ihe nchọpụta nje na-achọpụta sistemu iku ume 15".
N’ọnwa Febụwarị 2020, emechara R&D nke “kit nchọpụta nucleic acid ọhụrụ nke coronavirus”.
Na Nọvemba 2020, ọ nwetara nde dollar 5.4 n'isi isi ego.
E hiwere Foregene n'April 2011, lekwasịrị anya na mmepe nke teknụzụ bayoloji ihe ọhụrụ na ngwaahịa nyocha mkpụrụ ndụ.
Na 2015, Foregene mepụtara teknụzụ PCR Direct wee merie mba atọ na asọmpi Innovation na azụmaahịa nke "Ịga na Silicon Valley iji metụ mmadụ ijeri 1".
--Ikike mmepụta ihe